Accueil > Gazetin'ny nosy > Depiote Tgv/Mapar : Be taim-bava fotsiny fa tsy nahenika an’i Madagasikara
Depiote Tgv/Mapar : Be taim-bava fotsiny fa tsy nahenika an’i Madagasikara
Tena be taim-bava fotsiny ny fanjakana Andry Rajoelina fa na ny kandidà depiote narotsany aza dia tsy nahenika ny farim-pifidianana amin’ny distrika 119 manerana an’i Madagasikara. Raha ny taim-bava tany amin’ny propagandy nataon’ingahy Andry Rajoelina sy ny mpomba azy izay dia ho firenena mandroso ao anatin’ny fotoana fohy i Madagasikara. Dia mbola tadidin’ny malagasy rehetra ny filazany hoe « raha vao tonga eo amin’ny toerana aho dia tsy hiandry andry mihitsy fa telo volana dia handeha ny zavatra rehetra nolazaiko ».
Dia inona izany no hitranga amin’izao fitondrana izao satria tsy hisy depiote TGV/MAPAR na IFi (Isika rehetra miaraka amin’i Andry Rajoelina) amin’ny distrika 13 eto Madagasikara, izay efa nitombo iray izany ka lasa 14 satria ny kandidà any Fandriana ao amin’ny IFi dia nampidirina am-ponja vonjimaika ao Antanimora tamin’ny alakamisy faha faha 14 martsa 2109 lasa teo ingahy Hasimpirenena rehefa nandalo tao amin’ny PAC ( Pole anti-corruption).
Voalazan’ny mpikambana ambony iray ao amin’ny Mapar fa ny 30 amin’ny kandidà IFi ireo dia manana raharaha maloto any amin’ny fitsarana avokoa raha ny fantatray saingy nisy ny nifanaraka tamin’izy ireo sy nandray vola tamin’ireo olona antsoina hoe SN dia nataony amboletra ny fametrahana azy ho kandidà, izay nahatonga savorivory tao amin’ny mpanohana tao amin’ny ARENA tao. Dia porofo akaiky hoy ihany ity olona ity ny nahazo an’i Hasimpirenena iny ary mbola andrasana koa ny hafa.
Raha ny tarehimarika navoakan’ny CENI ( Vaomiera mahaleontena momba ny fifidianana) fa farim-pifidianana 106 ihany no nametrahan’ny mpomba an’i Andry Rajoelina kandidà. Ny TIM izay miaraka amin’ingahy Ravalomanana Marc indray dia 79 ihany no ananany olona kandidà.
Raha ny vinavinan’ny mpanaraka ny raharaham-pirenena dia tsy hahazo ny antsasa manila ny depiote ao Tsimbazaza velively ny IFi ity izay vondron’antoko miaraka amin’i Andry Rajoelina raha tsy hanao majia angaha. Toa izany koa ny avy amin’ny TIM.
Ny kandidà tsy miankina amin’ny antoko ny mpomba ny fanjakana sy ny mpanohitra azy izany no ho maro an’isa ao Tsimbazaza ao. Izy ireo dia mitsingevaheva aty tsy miraharaha raha tsy ny ao ampaosiny ihany ka tsy maintsy hisy indray izany ny resaka maloto. Izay midika izany fa mbola hiverina indray ny seho politika nitranga tamin’ny andron’ingahy Hery Rajaonarimampianina. Dia tsy maintsy hisy ny fikôtikôtina ny depiote tsy miankina ireo, ary rehefa mikôty azy ireo dia tsy maintsy ny vola sy ny malety no miala any.
Amin’ny resaka fahamarinan-toeran’ny fanjakana indray dia mazava ho azy fa sarotra ny raharaha satria tsy voafehy ny parlemanta. Sarotra hoan’ny mpomba an’i Andry Rajoelina no hahazoany depiote 71 izay antsasa-manila ny depiote ho ao Tsimbazaza ao. Niadiana mafy ny kandidà ho depiote Tgv/Mapar ary nahitana sarimihetsika be ny momba azy io. Maro no tezitra ny mpikambana Mapar tamin’izany ary nanao kandidà tsy miankina ka olona vaovao tsy fata-bahoaka indray no nasolo azy.
Tsy hipetraka fotsiny koa ireo kandidà TIM 79 ary indrindra ireo tsy miankina 515. Aoka hazava ankehitriny fa betsaka sahady no Malagasy no nanenina tamin’iny fifidianana izay ho filoham-pirenena iny. Tsy araka ny nanampoizana azy ny raharaha hoy ny feo heno etsy sy eroa. Na izany aza dia indraindray mahavita fahagagana ny antokon’ny fitondrana ka ho hitan-tsika ny fandehany amin’ny faha 28 may 2019 izao.
Raha ny fandehan’ny raharaham-pifidianana sy ny olona hilatsaka depiote izao dia mbola ny tamin’ny andron’ingahy Hery Rajaonarimampianina ihany no hitranga eto Madagasikara. Nandray fikambanana maro hanampy azy aza ny TGV/MAPAR dia mbola tsy nahenika ny faripiadidiana ny fifidianana 119 ihany. Midika izany fa sarotra hoan’ity fanjakana ity no hitondra an’i Madagasikara.